Yakachipa Yepamusoro-mhando Industrial Dutu Remhepo Guruva Muunganidzi Vatengesi uye Fekitori | YiZheng
Iyo Dutu inoshanda pakubvisa guruva risina-viscous uye risina-fibrous, mazhinji acho anoshandiswa kubvisa zvidimbu zviri pamusoro pemashanu mu m, uye iyo yakafanana multi-chubhu yedutu mutori mudziyo ine 80 ~ 85% yeiyo guruva yekubvisa kugona kwe zvikamu zve 3 mu m.
Chii chinonzi Cyclone Powder Guruva Muunganidzi?
Dutu Rinopfumisa Guruva Muunganidzi imhando yechigadzirwa chekubvisa guruva. Muunganidzi weguruva ane akakwirira ekuunganidza kugona kuguruva nekukura kwakati kurei uye kwakanyanya zvikamu. Zvinoenderana nehukuru hweguruva, hukobvu hweguruva hunogona kushandiswa sekubvisa guruva rekutanga kana rimwe-danho kubvisa guruva zvakateerana, kuitira gasi rinoparadza rine gasi uye tembiricha ine tembiricha ine-huru, inogona zvakare kuunganidzwa uye kugadziriswazve.
Chikamu chimwe nechimwe chedutu remuteresi chine huwandu hwehukuru saizi. Chero shanduko muiyero iyi inogona kukanganisa kugona uye kumanikidza kurasikirwa kwedutu revhu muteresi. Iyo dhayamita yeguruva muteresi, saizi yemhepo inlet uye hupamhi hwepombi yekuzadza ndiyo inonyanya kukonzera zvinhu. Uye zvakare, zvimwe zvinhu zvinobatsira kugadzirisa kunyatsobvisa guruva, asi zvichawedzera kurasikirwa kwekumanikidza, saka kugadzirisa kwechinhu chimwe nechimwe kunofanirwa kutariswa.
Chii chinonzi Cyclone Powder Dust Collector inoshandiswa kune for
Yedu Dutu Rinopfumisa Guruva Muunganidzi zvinowanzoshandiswa simbi, vachikanda, zvokuvakisa, kemikari maindasitiri, zviyo, simende, peturu, mwenje maindasitiri uye mamwe maindasitiri. Inogona kushandiswa seyakagadziriswazve michina yemidziyo yekuwedzera yakaoma isina-fibrous particle guruva uye kubviswa kweguruva.
Zvimiro zveChipupuri Guruva Muunganidzi
Iko hakuna zvikamu zvinofamba mukati meguruva guruva muteresi. Kugadziriswa kwakanaka.
2. Kana uchibata nehukuru hwemhepo vhoriyamu, zviri nyore kuti akawanda mayunitsi ashandiswe mukufananidza, uye kugona kwekurwisa hakukanganisike.
3. Guruva separator midziyo dutu kubvisa guruva kunogona kuramba kupisa kwakanyanya kwe600 ℃. Kana yakakosha tembiricha inodzivirira zvinhu zvinoshandiswa, inogona zvakare kuramba yakakwirira tembiricha.
4. Mushure mekunge mutori weguruva akashongedzerwa netambo yekupfeka, inogona kushandiswa kuchenesa flue gasi ine guruva rakakura.
5. Zvinobatsira kugadzirisa marara akakosha.
Yakagadzikana Kushanda & Kugadzirisa
Iyo Dutu Rinopfumisa Guruva Muunganidzi iri nyore muchimiro, zviri nyore kugadzira, kuisa, kuchengetedza uye kubata.
(1) Makasimba mashandiro ekushandisa
Iyo yekushandisa parameter yedutu reguruva muteresi kunyanya inosanganisira: iyo inlet mweya velocity yeguruva muteresi, tembiricha yeyakagadziriswa gasi uye inlet mizhinji kuwanda kweguruva-rine gasi.
(2) Kudzivirira kubhururuka kwemhepo
Kana dutu revhu rinotora rikadonha, rinokanganisa zvakanyanya kubviswa kweguruva. Maererano nekufungidzira, guruva rekubvisa kunyatsoshanda richadzikira ne5% kana mweya unodonha pazasi koni yeguruva muteresi iri 1%; guruva kubvisa kunyatsoshanda kuchaderera ne30% kana kubuda kwemhepo kuri 5%.
(3) Kudzivirira kupfeka kwezvikamu zvakakosha
Izvo zvinhu zvinokanganisa kupfeka kwezvikamu zvakakosha zvinosanganisira mutoro, mweya velocity, guruva, uye zvikamu zvakasakara zvinosanganisira ganda, koni uye guruva nzira.
(4) Dzivisa kuvhara guruva uye guruva kuunganidzwa
Kuvhara uye guruva kuunganidzwa kwedutu revhu muteresi kunonyanya kuitika padhuze neguruva, uye chepiri kunoitika mune yekudyira uye yekuzadza pombi.
Dutu Remhepo Poda Guruva Muunganidzi Vhidhiyo Ratidza
Dutu Remhepo Poda Guruva Muunganidzi Muenzaniso Sarudzo
Isu tichagadzira iyo Dutu Rinopfumisa Guruva Muunganidzi yeakakodzera maratidziro ako zvinoenderana nemhando yefetiraiza yekuomesa muchina uye chaiwo mamiriro ekushanda.
Pashure: Maindasitiri Akakwira Kupisa Kunopisa Dhizaini Fani
Zvadaro: Yakapwanyika Coal Burner
Nhanganyaya Chii chinonzi Rotary Drum Compound Fertilizer Granulator Machine? Rotary Drum Compound Fertilizer Granulator ndechimwe chemidziyo yakakosha muindasitiri yemafetireza. Iyo huru modhi yebasa kuperetera nemvura yakanyorova. Kubudikidza neimwe huwandu hwemvura kana hwemhepo, iyo yakakosha fetiraiza inogadzirwa zvizere nemakemikari mune cyli ...